Isweydaarsiga Hawada, Nidaamka qaboojinta, Farshaxanka - Tecfree
Wuxi Tecfree International waxay ku saleysan tahay Wuxi, bariga Shiinaha, aad ugu dhow Shanghai. Waxaan nahay hal adeeg bixiye takhasus leh oo diiradda saaraya xalka kuleylka kuleylka iyo muffler oo inta badan loo isticmaalo mashiinka dhismaha iyo qalabka warshadaha .waxa la aasaasay 2009, waxaana adeegyadeena siinaa macaamiisha adduunka tan iyo markaas.
Waxaan faham fiican la leenahay fikradaha macaamiisha iyo codsiyada annaga oo leh qibradeena iyo aqoonteenna.
Alaabooyinkeena ayaa loo dhoofiyay Yurub, Hindiya, Australia, Israail, Kuuriya iwm, waxay ku guuleysteen aaminaadda adduunka, iimaankan ayaa ina sii haynaya oo aan sii wadnaa. Waxaan ku faraxsanahay inaan aragno in badan oo mashiinno ah oo qalabaysan qalabkayaga qaboojiyayaasheeda & hiitarka biyaha keena ama muraayadaha-dabka
Muuqaal Dheeraad ah >>
Suuqa Wadaag Suuqa 1 ee Jabaan
Suuqa la wadaago No.1 ee Kuuriyada Koonfureed
Saliida si toos ah ugu gudbiya hawada ...
“Waxqabadka aadka u sarreeya wuxuu xaqiijinayaa waayo-aragnimada qaboojinta” TECFREE waxay haysaa R&D alaabo dheeri ah si ay u kordhiso aaladda kululeynta isla markaana ay xawaareyso kuleylka. Hordhac taxanahan p ...
Waa maxay bedellaha catalytic Beddelka catalytic waa qalab u adeegsada qalabka wax ka beddelaya inuu u beddelo saddex xirmooyin waxyeello leh oo ku jira gaaska burburka.
Waxaan dhisnay hiitarka raagaya iyo wajiga saliida ...
Waxaan ka dhignay hiitarka raagaya iyo kuleyliyeyaasha saliida mashiinnada wax soo saarka ee Griig toddobaadyo ka hor, maadaama macaamiilku u baahan yahay wax qabad ka sii wanaagsan xaaladda shaqada adag. Nalaliyahayagu wuxuu istaagi karaa v…
Qalabka kuleylku wuxuu ubaahan yahay hawo joogto ah oo hawadu maraan salkeeda si ay sifiican ugu qaboojiso. Markuu gaarigu dhaqaaqayo, tani waxay dhacdaa si kasta; laakiin markii ay taagan tahay taageere ayaa loo isticmaalaa inuu ka caawiyo hawo-mareenka. Fanaanka waxaa laga yaabaa in la wado ...
Kuleyliyaha kuleyliyaha-qaboojiyuhu waa naqshad kuleyliyaha inta badan lagu isticmaalo codsiyada mobilada halkaas oo aysan jirin agab dareeraha ah, sida gawaarida iyo gawaarida dhismaha. Sida magacu tilmaamayo, wuxuu hawo qaboojiyey ...